Haddii aad leedahay hoos u dhaca awooda laxaadka ah | Information om Sverige
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Haddii aad leedahay hoos u dhaca awooda laxaadka ah
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 24 3 2020
Haddii aad leedahay hoos u dhaca awooda laxaadka ah oo saamaysay jir ahaan ama maskax ahaan waxaa tani lagu magacaabaa hoos u dhaca awooda laxaadka. Tani michaneedu waxay ahaan kartaa inaad u baahantahay alaabta caawimaada ama taageero si aad u dabarto noloshaada maalinlaha ah ama si aad u shaqayso.
In la shaqeeyo iyadoo la leeyahay hoos u dhac awooda ah
Waa muhiim inaad si toos ah ugu sheegto Xafiiska Shaqada haddii aad leedahay hoos u dhac awooda ah. Xafiiska Shaqada ayaa kaa caawin karta tusaale ahaan in goobtaada shaqada la waafajiyo si ay adiga kuugu haboonaato. Adigu waxaad xitaa heli kartaa taageerada la taliyaha dhagoolayaasha, qof ku takhasusay araga ama turjubaanka luqada gacmaha ee dhagoolayaasha haddii aad leedahay hoos u dhac ah maqalka ama araga.
Waxaad xaq u yeelan kartaa noocyo kala duwan oo taageero ah taas oo ku xiran nooca hoos u dhaca awooda laxaadka ah ee aad leedahay.
Akhri dheeraad ku saabsan waxa khuseeya adigaaga leh hoos u dhac awooda ah.